दुबईले माग्यो ४०० पुरुष कामदार, कति छ तलव ? – Taja Khawar
दुबईले माग्यो ४०० पुरुष कामदार, कति छ तलव ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०१, २०७८ समय: २:२८:०७
कुलमान घिसिङ नयाँ ‘टिम’ बनाउँदै, महत्वपूर्ण निर्देशनालयमा ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ लाई प्राथमिकता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दोस्रो कार्यकालका लागि आफ्नो ‘टिम’ बनाउन सुरु गरेका छन् । नेतृत्व फेरिएसँगै माथिल्लो तहबाट जिम्मेवारी हेरफेर भएको सुरु भएको हो । उनले पहिलो चरणमा केही उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशनालय प्रमुखहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् ।
घिसिङले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयमा उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई ल्याएका छन् । सिलवालले यसअघि घिसिङलाई एडीबीका प्रसारण तथा वितरणका आयोजना हेर्ने ‘आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय’मा बसेर सघाएका थिए । पछिल्लो समय इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयमा रहेका सिलवाललाई घिसिङले यसपटक वितरण प्रणालीको विस्तार र सुधार गर्ने जिम्मा दिएका छन् ।
यसैगरी सामान्य सेवा विभागका निर्देशक बेलप्रसाद शर्मालाई जनसाधन विभागमा लगिएको छ । जनसाधन विभागका सहनिर्देशक विश्वनाथ शर्मालाई समान्य सेवा विभागको प्रमुखका रुपमा तोकिएको छ ।
कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उप निर्देशक रोसनलाल सुनारलाई उत्पादन निर्देशनालयको प्रशासन महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । उत्पादन निर्देशनालयकी उपनिर्देशक इन्दिरादेवी दहात्तलाई उत्पादन निर्देशनालयबाट व्यवस्थापन लेखापरीक्षण महाशाखाको प्रमुखका रुपमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
व्यवस्थापन लेखापरीक्षण महाशाखाका जिपानन्द श्रेष्ठलाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको प्रमुखका रुपमा सरुवा गरिएको छ ।
Last Updated on: August 17th, 2021 at 2:28 am